Maxay doorashada Jubbaland xiisad Gooni ah u leedahay? sii Akhri – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 28 May 2019
Jubbaland waxa kusoo food leh doorasha adag, doorashadan waxay leedahay muhiimad gooni ah maadama dowlada federalka, Taliska mamulka jubbaland, dowlada Kenya, badda liska haysta ee maxkamada taala, reer galbeedka, carabta, AMISOM, EU, UNSOM, mucaarad fara badan iyo kooxo kale oo fara badan ee qarsoon dhaman ay muhiimad gooni ah u leedahay, ishana kuwada hayaan doorashada jubbaland.
Waxa jira weerar afka ah ee ay isku adeegsanayaan taageerayaasha mamulka hada talada haya iyo mucaaradka oo raba inay lawareegaan maamulka. Taageerayaasha waxay ku andacoonayaan in jubbaland nabad tahay, wax qarax ah, dhimasha micna dara ama dil bareer ah uusan hada kajirin ayada oo kuwa kasoo horjeeda ay ku andacoonayaan su’aalna ay galiyeen fahamka ah jubbaland waa nabad, ayaga oo kudoodaaya in dadka dagan dhaman Jubada dhexe aysan haysanin nabad oo Al-shabab kuhoos noolyahiin, ayada oo jilib, jamaame, meelo badan oo jubada hoose iyo gedo ay dadka dagan xur ka aheyn Al-shabaab.
Doorashada Jubbaland waxay dhici doonta august, 15 2019, waxay kusoo aadeysaa qabanqaabadeeda ayada oo dowlada federalka iyo mamulka jubbaland uusan kadhaxeynin wax wada shaqeen ah, ayada oo Somaliya iyo Kenya xasarada siyaasadeed kadhaxeeya ayada oo Jubbaland ay tahay Meesha muuranka badda kajira taasi oo maxkamada ICJ qaadi doonta dacwadaas bisha September, 2019.
Dhaman kuwa muhiimada uleedahay waxay xooga saarayaan in uu soo baxa shaqsi maslaxadooda kashaqeen kara, waana wax iska caadi ah xiriirka caalamiga marka lafiiriya, dowlad walba waxay rabtaa intuu soo baxa qofka danta ay leeyihiin fulan kara.
Ahmed madoobe wuxu talada hayi ilaa 15 May, 2013. Jubbaland waxay kujirtay isjiijiid iyo qayli ilaa maalinta la yagleelay ilaa hada, badi waxay ugu imaaneysi tawashada ay qabaan beelaha kala duwan ee dagan, dowlad dhexe iyo wajiya kale oo kala duwan.
Dowladii Hassan sheikh iyo dowladan farmaajaba mamulka muran aya kala dhaxeeyay. Dowladii hassan sheikh bartamihii bishii 06/2015, baarlamanka federalka Somaliya waxay cod uqaadeen, kalana direen xildhibaanadii jubbaland ayaga oo kudooday in si siman dadka deeganka ah looga qeybinin wallow aysan shaqeynin kala diridaas.
Dowlada farmaajo iyo mamulka jubbaland ayaa sidoo kale madaxa iskula jira tan iyo markii ladoortay ayada oo loo aaneynaayo danooyin kala duwan oo kuxeeran deegaanka iyo dadka jubbalandba.
Maadama Ahmed madoobe magaalada Kismayo uu kadhigay magaala amni ah oo marnaba Al-shabaabka kuweegaarsan magaalada usuurta galiweysi in wax qarax ah kafuliyaan hadana waxa shaki kujiraa in musharixiinta hada Kismayo kusugan ay awoodi karaan in dadka dhiigiisa uu nabad galo.
Hadii usoo laabta Ahmed madoobe iyo hadii mid cusub uu yimaadaba marwalba waxa horyaala howla adag oo loobahanyahay in wax laga qabta si looga gudbo dhibaatooyinka dib udhigay markii hore sida Xureenta degaanada gacanta mamulka kamaqan, xalinta tawashada beelaha saluugsan saami qeybsiga mamulka, wada shaqeynta dowlada dhexe, iyo arimo kale oo fara badan.
Doorashada jubbaland waxay noqondoonta mid xiisad gooni leh maadama shirkada shidaal, doorashada 2020, hardanka Kenya iyo Somaliya iyo quwada kale oo waaweyn sameen ay kuyeelan doonaan doorashan. Waxay noqondoonta mid jiheysa mustaqbalka iyo Meesha loo socda.
Waxan sugnaaba waa august 15, 2019 iyo doorasho dhacda,xalaal iyo xaaraam waxay ahaataba.